Nzira iwe kunotaura nomumwe Papa Pear pamwero ine chihombe kukanganisa kwako chikuru kubudirira kana kukundikana. Nepo zvinangwa nerimwe sandara vari pachena nzira yakanakisisa iyo kunosangana zvinangwa izvi kakawanda kunogona kuva zvishoma kujeka. Dzimwe nguva pane zvahungava hwakaita zvakavimbika shoma, Mazano uye mazano kuti unogona kudzidza kubva vaya vanoomesa musoro vakarwa pamberi penyu!
Ziva nguva 'kupisa’ uye kana kuchitonhora kuti sizzle – Mumurazvo Papa makuru, vanogona neutralize pesky Spiky muchero kuti kurega rako papa chando, vanogona kupisa kuburikidza and chilis, michero, acorns & makarotsi nokukurumidza uye zvinokosha crisping kukwira pizi pods kuti kupararira zvakasvibirira shoma nokukurumidza anorovera nenzira yako. achiziva Zvisinei kana kuti zvinoshingaira kutsvaka moto nembambo uye kana kudzivisa navo zvodii kunokosha. Vamwe siyana akadai Level 77 kana 90.
Also tarisa Candy Crush mutambo Download!